IHolly Tree Cottage - I-Airbnb
IHolly Tree Cottage
Ukubuyela ezilalini kumda we-Broads kwi-Waveney Valley entle. Imizuzu nje engama-30 uqhuba usuka kunxweme olusempuma olumangalisayo kunye nesixeko esiyimbali saseNorwich. Le ndawo yeholide ikulungele ukuphumla kwaye ukonwabela ukuhamba kwalapha ekhaya kunye namaphandle amangalisayo okanye "ukuphuma nokujikeleza" kuhambo lwemini. Yonwabela iimayile ezikude kwiindlela zeenyawo ezinqumla kumda omhle weNorfolk/Suffolk. Iidolophu zentengiso yasekhaya yaseBungay kunye ne-Beccles zinezinto ezininzi ezinomtsalane kunye ne-Beccles njenge "Gateway to the Norfolk Broads"
Indawo yokuhlala yi-bungalow ezimeleyo esecaleni komnyango wendlu ye-Hosts. Ibiyelwe kwaye yabucala ngokupheleleyo. Yile mihla kwaye ixhotyiswe kakuhle kwaye ibonelela ngendawo yokuhlala ephangaleleyo ezimbini ezibonelela ngegumbi lokulala elahlukileyo, igumbi lokuhlambela, indawo yokusebenzela kunye nekhitshi / igumbi lokuhlala "ekhaya ukusuka ekhaya" ukuhlala kamnandi. Inendlela yayo yokuqhuba kunye neendawo zokupaka kwaye inendawo enkulu yokuhlala ngaphandle kunye ne-bbq. Indawo yangaphandle ivalwe ngokupheleleyo kwaye ke ngoko ilungele inja. Ngaphakathi yeyanamhlanje, inesitayile kwaye ixhotyiswe kakuhle. Ikhaphukhaphu kwaye inomoya kwaye ineendawo zophahla ezivulekileyo kunye neefestile zevelux ezivumela ukukhanya kwendalo okuninzi. Indawo yokuhlala ilungele izibini kodwa samkela iintsana ezongezelelweyo ezingaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala ukuba ungabonelela ngebhedi yakho kunye nelinen.
Le yayiyigaraji ngokusesikweni kunye nendlu yasefama eyathi yaguqulwa kwiminyaka eli-10 eyadlulayo yayisihlomelo kuyo yonke imimiselo yolwakhiwo lwangoku olugcina ubushushu kwaye bupholile ebusika.
Ngaphakathi kwilali, iBroome Heath ityelelwa ngabantu abasuka kwiimayile ezijikeleze njengoko isaziwa ngamachibi amnandi kunye nokuhamba kwelizwe.
I-Artichoke pub e-Broome inobuhlobo kwaye inika ukutya okumnandi kunye nee-ales zokwenyani. Ziyi-pub enobuhlobo nezinja. Iidolophu kunye neelali zasekuhlaleni zikwanobutyebi beendawo zelizwe kunye nokutya okulungileyo.
Sihlala ebumelwaneni kwaye siya kukuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo ukuba sisekhaya. Siyaqhagamshelwa ngawo onke amanye amaxesha ngokuthumela umyalezo. Sikholelwa ekunikeni iindwendwe zethu ubumfihlo obupheleleyo kunye nendawo yokonwabela iholide yazo.
Sihlala ebumelwaneni kwaye siya kukuvuyela ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo ukuba sisekhaya. Siyaqhagamshelwa ngawo onke amanye amaxesha ngokuthumela umyalezo. Sikholelwa ekuniken…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Broome